Deegaano Hoos-taga Gobolka Bari oo biyo la’aan laga Soo Sheegayo – Radio Daljir
Abriil 15, 2015 9:03 b 0
Arbaco, Abriil 15, 2015 (Daljir) — Maamulka degmada Qandala ee gobolka Bari ayaa sheegay in biyo la’aan daran oo ka jirta degmada ay saamayn xoogan ku reebtay dadkii deeegaanka ,isla markaana loo baahan-yahay in arintan si deg deg ah wax looga qabto.
“Dhibaatada noogu daran waxa ay tahay degmada oo aan lahayn ceelal ku filan, xiligan la joogana biyo la’aantu waxa ay saamaysay in kabadan 30 tuulo oo hoostaga Qandala,“ ayuu yiri gudoomiyaha Qandala Jaamac Maxamed oo la hadlay warbaahinta gudaha.
“Waxa dadku ay bilaabeen in ay ka hayaamaan tuulooyinkii ay ku noolaayeen, iyagoo biyo raadinaya ,kumana filna ceelalka halkan ku yaala,“ ayuu mar kale yiri gudoomiyaha oo ugu baaqay dowladda in aritnan ay wax ka qabato.
Masuulkan ayaa sheegay in tuulooyinka qaar oo horey barkado uga cabi jiray ay hadda ku sugan-yihiin xaalad quus ah, wuxuuna sheegay in tani ay sabab tahay xilli roobaadkii oo ka soo daahay degmada, iyadoo aysan ilaa iyo hadda jirin wax gargaar ah oo ay ka heleen maamulka gobolka Bari.
Dhinaca kale gudoomiyaha ayaa sheegay in degmada Qandala uusan kajirin dugsi sare loona baahanyahay in xiligan la hirgaliyo, isagoo tilmaamay in howshan ay kala kaashan doonaan wasaaradda waxbarashada ee Puntland.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha ayaa ka dalbaday hay’adda biyaha Puntland ee PSWEN in loo soo gurmado dadka ku dhibaataysan degmada, wuxuna xusay in wasaaradda arimaha gudaha looga baahan-yahay waxkaqabashada arintan.
Madaxweyne Gaas iyo wefdi uu hogaaminayo oo u dhoofay Itoobiya